အမျိုးသားနေ့မှာ လက်ထပ်ချင်ဟု နိုင်းဝမ်း (G Family) ပြောကြား - SANTHITSA
အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းက ချစ်သူ မေမျိုးသူကျော်နဲ့ အမျိုးသားနေ့မှာ လက်ထပ်ချင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို အမျိုးသားနေ့မှာ outdoor area တစ်ခုမှာ ကျင်းပချင်ပြီး အဆိုပါနေ့မှာ လက်ထပ်ချင်တာက ချစ်သူမိန်းကလေးက ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်နဲ့ သူက မင်္ဂလာပွဲ date လိုချင်တာက ဒီဇင်ဘာ ၉ရက် အမျိုးသားနေ့ပါ။ ကျွန်တော့်ချစ်သူကမင်္ဂလာပွဲကို outdoor မှာ လုပ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း နေရာတွေ လိုက်ချိတ်နေတယ်။ တကယ်လို့ နေရာ အဆင်မပြေရင် မင်္ဂလာ လက်မှတ် ထိုးတာဖြစ်ဖြစ် မင်္ဂလာ ဆွမ်းကျွေးတာ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်။ ဒီရက်ကို လိုချင်တာက သူက ဝန်ထမ်းလေ။
အဲဒီတော့ သူ့ရုံးပိတ်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက် မဟုတ်ရင် မအားနိုင်ဘူး။ နောက် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင် anniversary တွေမှာ ပိတ်ရက်ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ခရီးထွက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူ့အတွက် အဆင်ပြေတယ်။
anniversary မှာ နောက်နှစ်‌တွေထိ ပိတ်ရက်လေး ရေရှည်ကြည့်တာပေါ့” လို့ အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းက လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲရက် သတ်မှတ်တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပါတယ်။
အဆိုတော် နိုင်ဝမ်း လက်ထပ်မည့် ချစ်သူ မိန်းကလေးက ငယ်ချစ် ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ချစ်သူ မိန်းကလေးရဲ့ ဖြူစင်ရိုးသားမှုက ဆွဲဆောင်မှု ရှိနိုင်လွန်းတယ်လို့ နိုင်းဝမ်းက အမွှမ်းတင် ပြောဆိုပါတယ်။
“သူနဲ့ ကြိုက်တာ ၉. ၉. ၂၀၀၉ ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက သူက ဆယ်တန်းဖြေထားတာ၊ ကျနော်က အဆိုတော်တောင် မဖြစ်သေးဘူး။ နိုင်းဝမ်း ဖြစ်မလာခင် ဘတ်စ်ကား တိုးစီးပြီး စတူဒီယို သွားကတည်းကပေါ့။ ငယ်ချစ်ပေါ့။
နိုင်းဝမ်း ဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် control မရချိန် တစ်နှစ်ခွဲလောက် သူ့ကို ထားခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄/ ၂၀၁၅ပေါ့။ အဲဒီနောက် စိတ်ညစ်ပြီးနေချိန်မှာ သူက နားလည်မှုနဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ်။
အဲဒီအချိန် သူနဲ့ ပြန်တွဲတာပါ။ သူက ကျွန်တော်ပြောရမယ် ဆိုရင် လောကမှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အရာက ဖြူစင်မှုပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရောင်တင်ကြည့်ဖူးတယ်။ အဲဒါ ဆွဲဆောင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်က လူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ပြန်သင်ယူရတာ ရှိတယ် “လို နိုင်းဝမ်းက လက်တွဲဖော် ရွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
အဆိုတော်နိုင်းဝမ်းနဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်းမှာ ၁၀နှစ်ကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သတင်း – ဝါးဝါးလေး
ဓာတ်ပုံ – နိုင်းဝမ်း‌ ဖေ့ဘွတ်ခ်
အမြိုးသားနမှေ့ာ လကျထပျခငျြဟု နိုငျးဝမျး (G Family) ပွောကွား
အဆိုတျော နိုငျးဝမျးက ခဈြသူ မမြေိုးသူကြျောနဲ့ အမြိုးသားနမှေ့ာ လကျထပျခငျြကွောငျး ပွောပါတယျ။
ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ လကျထပျမင်ျဂလာပှဲကို အမြိုးသားနမှေ့ာ outdoor area တဈခုမှာ ကငျြးပခငျြပွီး အဆိုပါနမှေ့ာ လကျထပျခငျြတာက ခဈြသူမိနျးကလေးက ဝနျထမျးတဈဦး ဖွဈနတောကွောငျ့လို့ ပွောပါတယျ။
“ကြှနျတျောနဲ့ သူက မင်ျဂလာပှဲ date လိုခငျြတာက ဒီဇငျဘာ ၉ရကျ အမြိုးသားနပေ့ါ။ ကြှနျတေျာ့ခဈြသူကမင်ျဂလာပှဲကို outdoor မှာ လုပျခငျြတယျ။ ကြှနျတျောလညျး နရောတှေ လိုကျခြိတျနတေယျ။ တကယျလို့ နရော အဆငျမပွရေငျ မင်ျဂလာ လကျမှတျ ထိုးတာဖွဈဖွဈ မင်ျဂလာ ဆှမျးကြှေးတာ ဖွဈဖွဈ လုပျမယျ။ ဒီရကျကို လိုခငျြတာက သူက ဝနျထမျးလေ။
အဲဒီတော့ သူ့ရုံးပိတျရကျ၊ အလုပျပိတျရကျ မဟုတျရငျ မအားနိုငျဘူး။ နောကျ ကြှနျတျောတို့ အိမျထောငျ anniversary တှမှော ပိတျရကျဖွဈနတေော့ ကြှနျတျောတို့တှေ ခရီးထှကျတာဖွဈဖွဈ၊ ဘာဖွဈဖွဈ သူ့အတှကျ အဆငျပွတေယျ။
anniversary မှာ နောကျနှဈ‌တှထေိ ပိတျရကျလေး ရရှေညျကွညျ့တာပေါ့” လို့ အဆိုတျော နိုငျးဝမျးက လကျထပျမင်ျဂလာပှဲရကျ သတျမှတျတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပါတယျ။
အဆိုတျော နိုငျဝမျး လကျထပျမညျ့ ခဈြသူ မိနျးကလေးက ငယျခဈြ ဖွဈကွောငျးသိရပွီး ခဈြသူ မိနျးကလေးရဲ့ ဖွူစငျရိုးသားမှုက ဆှဲဆောငျမှု ရှိနိုငျလှနျးတယျလို့ နိုငျးဝမျးက အမှမျးတငျ ပွောဆိုပါတယျ။
“သူနဲ့ ကွိုကျတာ ၉. ၉. ၂၀၀၉ ပေါ့။ အဲဒီတုနျးက သူက ဆယျတနျးဖွထေားတာ၊ ကနြျောက အဆိုတျောတောငျ မဖွဈသေးဘူး။ နိုငျးဝမျး ဖွဈမလာခငျ ဘတျဈကား တိုးစီးပွီး စတူဒီယို သှားကတညျးကပေါ့။ ငယျခဈြပေါ့။
နိုငျးဝမျး ဖွဈလာတော့ ကြှနျတျော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ control မရခြိနျ တဈနှဈခှဲလောကျ သူ့ကို ထားခဲ့တယျ။ ၂၀၁၄/ ၂၀၁၅ပေါ့။ အဲဒီနောကျ စိတျညဈပွီးနခြေိနျမှာ သူက နားလညျမှုနဲ့ ပွနျရောကျလာတယျ။
အဲဒီအခြိနျ သူနဲ့ ပွနျတှဲတာပါ။ သူက ကြှနျတျောပွောရမယျ ဆိုရငျ လောကမှာ ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံး အရာက ဖွူစငျမှုပါ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အရောငျတငျကွညျ့ဖူးတယျ။ အဲဒါ ဆှဲဆောငျမှု မဟုတျပါဘူး။ ဖွူစငျတဲ့ စိတျဓာတျက လူတိုငျးကို ဆှဲဆောငျနိုငျတယျ။ သူ့ကို ကွညျ့ပွီး ပွနျသငျယူရတာ ရှိတယျ “လို နိုငျးဝမျးက လကျတှဲဖျော ရှေးဖွဈတဲ့အကွောငျး ပွောပါတယျ။
အဆိုတျောနိုငျးဝမျးနဲ့ ခဈြသူမိနျးကလေးရဲ့ ခဈြသူသကျတမျးမှာ ၁၀နှဈကြျော ရှိပွီ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
သတငျး – ဝါးဝါးလေး
ဓာတျပုံ – နိုငျးဝမျး‌ ဖဘှေ့တျချ
Total Hits : 2077006